အများဆုံးယောက်ျားရဲ့အဓိကချန်ပီယံကိုအနိုင်ပေးများအတွက်စံချိန်သူတို့ထဲက 18 အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်သူကိုဂျက် Nicklaus ကငျြးပခဲ့သညျ။ က Tiger Woods 14 အဓိကအနိုင်ပေးနှင့်အတူဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဗိုလ်ကြီးတက်စေသောလေးယောက်ပြိုင်ပွဲ - ကြောင်းဖြစ်ရပ်အတွက်ဆုရရှိသူတစ်ဦးအချိန်နဲ့တပြေးညီစာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်တစုံတယောက်သောသူသည်ကို click - နေသောခေါင်းစဉ်:
PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
အောင်ပွဲအရေအတွက်၏အမိန့်ဆင်းအတွက်အဓိကဆုရရှိသူစာရင်းပြုစုထားတဲ့အောက်ကဇယား, အပြင်, သငျသညျနည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခုသည်အဓိကဆုရှင်စာရင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်:
အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ Professional ကအဓိကအများစုမှာနိုင်ပွဲများ
ဤဇယားကိုယောက်ျားရဲ့ဗိုလ်ကြီးအနည်းဆုံးသုံးအနိုင်ပေးအဓိကချန်ပီယံအောင်ပွဲသူတို့ရဲ့အရေအတွက်စုစုပေါင်းနှင့်အတူတိုင်းဂေါက်သီးလည်းပါဝင်သည်, ပေါင်းဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံး (သို့မဟုတ်လတ်တလော, တက်ကြွဂေါက်သီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်) အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဂေါက်သီးရိုက်သူ ဗိုလ်မှူးနိုင်ပွဲများ ပဌမ နောက်ဆုံး
ဂျက် Nicklaus 18 1962 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့် 1986 မာစတာ
က Tiger Woods 14 1997 မာစတာ 2008 အမေရိကန်ပွင့်လင်း
Walter Hagen 11 1914 ခုနှစျကအမေရိကန်ကိုဖွင့် 1929 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ဘင် Hogan91946 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 1953 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ဂယ်ရီ Player ကို91959 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1978 မာစတာ
တွမ် Watson 8 1975 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း 1983 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း
Bobby ဂျုံးစ်71923 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1930 အမေရိကန်ပွင့်လင်း
အာနိုး Palmer က71958 မာစတာ 1964 မာစတာ
မျိုးဗီဇ Sarazen71922 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1935 မာစတာ
ဆမ် Snead71942 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 1954 မာစတာ
ဟယ်ရီ Vardon71896 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1914 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
နစ်ခ် Faldo61987 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1996 မာစတာ
Lee က Trevino61968 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1984 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
Seve Ballesteros51979 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း 1988 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း
ဂျိမ်းကျစ်51901 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1910 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ဖီးလ် Mickelson52004 မာစတာ 2013 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း
Byron နယ်လ်ဆင်51937 မာစတာ 1945 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
JH တေလာ51894 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1913 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ပတေရုသသွန်မ်ဆင်51954 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း 1965 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ဝီလီအန်ဒါဆင်41901 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1905 အမေရိကန်ပွင့်လင်း
ဂျင်မ် Barnes41916 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 1925 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
Ernie Els41994 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့် 2012 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း
ရေမွန် Floyd41969 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 1986 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်
Bobby လော့ခ်41949 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1957 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
Rory McIlroy42011 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့် 2014 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
ဟောငျးတွမ်မောရစ်41861 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1867 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
Young ကတွမ်မောရစ်41868 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1872 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ဝီလီပန်းခြံ Sr;41860 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1875 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ဂျေမီ Anderson က31877 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1879 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
Tommy ချပ်ဝတ်တန်ဆာ31927 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1931 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
Julius Boros31952 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1968 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
Billy Casper31959 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1970 မာစတာ
ဟင်နရီလဲမှို့31934 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1948 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
ဂျင်မီ Demaret31940 မာစတာ 1950 မာစတာ
Bob ကဖာဂူဆန်31880 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1882 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
Ralph Guldahl31937 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1939 မာစတာ
Padraig Harrington32007 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း 2008 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
Hale က Irwin31974 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့် 1990 အမေရိကန်ပွင့်လင်း
cari Middlecoff31949 အမေရိကန်ပွင့်လင်း 1956 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်
Larry ကနယ်လ်ဆင်31981 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 1987 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
နစ်ခ်စျေး31992 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 1994 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
Dennis Shute31933 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း 1937 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
ဗီဂျေး Singh က31998 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 2004 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
ယော်ဒန်မြစ် Spieth32015 မာစတာ 2017 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း
Payne Stewart က31989 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ 1999 အမေရိကန်ပွင့်လင်း
အဓိကအများစုမှာနိုင်ပွဲများ - အပျော်တမ်း & Professional ကပေါင်းချုပ်
ဗိုလ်ကြီးအတွက်သူတို့ရဲ့အနိုင်ပေးခြင်းဖြင့်ဂေါက်သီးအဆင့်တဲ့အခါမှာဒါဟာအမေရိကန်အပျော်တမ်းနှင့်ဗြိတိန်အပျော်တမ်းချန်ပီယံအတွက်အနိုင်ပေးထည့်သွင်းရန်တစ်ချိန်ကဘုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကအနည်းဆုံးအစောပိုင်း 1960 မှတဆင့်စံရှိ၏ 1980 ကာလအတွင်းဖြစ်ကောင်းထွက်နွမ်းခင်အထိလျော့နည်းဘုံဖြစ်လာ။
ဂျက် Nicklaus - 20
က Tiger Woods - 17
Bobby ဂျုံးစ် - 13
ယောဟနျသ Ball ကို - 9
ဘင် Hogan - 9
ဂယ်ရီ Player ကို - 9
အာနိုး Palmer က - 8
တွမ် Watson - 8
အများစုကဗိုလ်မှူးပြိုင်ပွဲ Per ဆွတ်ခူး
အဆိုပါမာစတာ: ဂျက် Nicklaus,6ကိုအနိုင်ပေး
အမေရိကန်ကိုဖွင့်: (လည်စည်း) ဝီလီအန်ဒါဆင်, Bobby ဂျုံးစ်, ဘင် Hogan နှင့် Nicklaus,4အနိုင်ပေးတစ်ခုချင်းစီ
ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: ဟယ်ရီ Vardon, 6
PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: (လည်စည်း) Walter Hagen နှင့် Nicklaus,5ကိုအနိုင်ပေးတစ်ခုချင်းစီ
နောက်ကျောဂေါက်သီး Almanac မှ
ဘယ်လိုက Tiger Woods သူ၏အမည်ဝှက်ကိုရယူလိုက်ပါခဲ့သလား သူမဆိုအခြားသူများဖူးပါသလား?
ဂျူဒီ Rankin ကိုယ်ရေးဖိုင်
က Tiger Woods '' မိဘများ: မေမေနှင့်ဖေဖေ Are ဘယ်သူနည်း
ဘယ်အချိန်မှာက Tiger Woods ကသူ၏ပထမဦးစွာအမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားပုံပန်းသဏ္ဍာန် Make ခဲ့သလား
က Tiger Woods ဖြတ် Streak
အဆိုပါအသက် 21 မတ်လ 1960 Sharpeville အသတ်ခံရမှု
Grammar အတွက်ဘွဲ့ Modify
စာပေပြုစုရေးအတွက်မှန်ကန် bracket အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဗာဂျီးနီးယားစစ်ဘက် Institute မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
တစ်ဦး Variable ဆိုတာဘာလဲ
Perl အတွက် Directory ကို မှစ. တစ်ဖိုင်မှတ်တမ်းကိုပြောပြပါလုပ်နည်း
ESL သင်ခန်းစာ - ခရီးသွားအစီအစဉ်များ
အာကာသအတွင်းရှိစစ်ဘက်ဆိုင်ရာရဲ့ Options ကို
ဘုံလျှောက်လွှာကိုယ်ပိုင်စာစီစာကုံး Option ကို 2
အဓိပ္ပာယ်နှင့် Logical မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ဥပမာ
Jaikara သတ်မှတ်ထားသော: Sikhism ၏လူကြိုက်များသောဂုဏ်ပြုပါရစေ
ဂျပန် Empress Suiko
တစ်ဦးကအလယ်ခေတ်သီချင်း Love Story
သင်ကစူပါ PACs အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို
MSRP စျေးနှုန်း vs. သည့် MAP: သူတို့ကအဓိပ်ပာကဘာလဲ, သူတို့ကနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကဘယ်လို
RNA vs. DNA ကို